Mogadishu Journal » Ciyaaryahan Caan ah oo toogasho lagu dilay
Mjournal :-Ciyaartoy hore oo dheeli jiray kubadda cagta una dhashay dalka Koonfur Afrika,Mark Batchelor ayaa lagu toogtay meel u dhaw gurigiisa oo ku yaalla magaalada Johannesburg, sida ay sheegeen booliska dalkaas.
“Waxaa lagu furay rasaas,waxaa laga toogtay daaqadda, goobtii ayuu ku geeriyooday” waxaa sidaas yiri Col Lungelo Dlamini oo ah afahayeenka booliska xilli uu la hadlayay warbaahin kasoo baxda dalkaas.
Wuxuu intaas ku daray in ilaa hadda aanan la ogeyn sababta ka dambeysay dilka loo geystay Mark Batchelor isla markaasna aysan jirin cid loo soo xiray dilkiisa oo lagu tuhmayo.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in booliska ay baarayaan dhacdadaas.
Batchelor,ayaa waxaa uu dheeli jiray kooxaha kubadda cagta ee ugu waaweyn dalka Koonfur Afrika, waxaa geeridiisa ka naxay saaxibo badan.
“Waxaa uu ahaan jiray ciyaaryahan ka shaqeyn jiray wanaajinta ciyaarta, waxaa uu ahaa mid doonayay inuu markasta gaaro guusha” sidaas waxaa yiri Steve Lekoelea oo ay kubadda cagta isla dheeli jireen.